हिट हुन सुदर्शनको शरणमा पुगेका हुन् पल ? - Chautari Post Online
हिट हुन सुदर्शनको शरणमा पुगेका हुन् पल ?
फिल्ममा टिक्न र विक्न सबै कलाकारलाई हिट फिल्मको खाँचो पर्छ । कुनै कलाकारको खातामा हिट फिल्मको संख्या छैन भने ऊमाथि लगानी गर्न निर्माताले आँट जुटाउँदैनन् । सबैले बेलेको आगो नै ताप्ने हुन् । त्यसैले आफूले अभिनय गरेका फिल्मले राम्रो व्यापार गरोस् भन्ने चाहना फिल्ममा अभिनय गर्ने हरेक कलाकारको हुन्छ । तर, कहाँ सबैको सपना पूरा हुन्छ र ! सफलता र असफलता भनेको त जीवनका पाटाहरु हुन् ।
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा केही सीमित अभिनेता छन्, जसलाई बक्सअफिसमा असफल हुने अधिकार छैन भन्ने गरिन्छ । अभिनेता द्वय अनमोल केसी र प्रदीप खड्कापछि यो दबाबको भारी बाक्ने अभिनेता हुन्, पल शाह । नेपाली फिल्म भनेपछि नाक खुम्च्याउने युवापुस्तालाई हलसम्म डोर्‍याउन उनको ठूलो योगदान छ । म्यूजिक भिडियोमा आफ्नो बलियो साम्राज्य बनाएका उनले फिल्म ‘नाईं नभन्नू ४’ बाट नेपाली फिल्ममा डेब्यू गरेका थिए ।
डेब्यू फिल्म हिट भएपछि उनको डिमान्ड र पारिश्रमिक निकै चुलिँयो । दोस्रो फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ गरे । सुदर्शन थापा निर्देशित फिल्ममा उनले अभिनेत्री पूजा शर्मासँग जोडी बाँधेका थिए । यो फिल्म पनि हिट भयो । तेस्रो फिल्म ‘जोनी जेन्टलम्यान’ बाट उनी व्यावसायिक रुपमा तीन सफल फिल्म दिएर ह्याट्रिक गर्ने सोचमा थिए । तर, सपना अधूरै रह्यो । यद्यपि, चौथो फिल्म ‘शत्रु गते’ बाट उनले हिट फिल्ममा ह्याट्रिक गरे ।
शहरिया युवापुस्तामा राम्रो क्रेज भएका पल अभिनीत पाँचौ फिल्म ‘बीर विक्रम २’ गएको जेठमा रिलिज भएको थियो । हिट फिल्मको सिरिज भएका कारण फिल्मले बक्सअफिसमा घाटाको व्यापार नगर्नेमा उनी विश्वस्त थिए । तर, फिल्मले हलमा हावा खायो । न त उनको अभिनय नै रुचाइयो । हुन त, उनले अहिलेसम्म कुनै फिल्मबाट अभिनयको तारिफ पाएका छैनन् । हरेक फिल्ममा उनको अभिनयको जमेरै आलोचना हुने गरेको छ ।
‘बीर विक्रम २’ को असफलतापछि पल नराम्रोसँग हच्किएका छन् । उनी अब हतारमा फिल्म छनोट नगर्ने मनस्थितिमा छन् । किनकि, छैटौं फिल्मको बक्सअफिस कलेक्सनले उनको करिअरमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म उनले पाँच फिल्म गरेका छन्, जसमा तीन फिल्म सफल भए भने बाँकी दुई फिल्म फ्लप । अब, छैटौं फिल्मले उनलाई फ्लप फिल्ममा ह्याट्रिक गर्न रोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उनी हतारमा फिल्म गरेर फुर्सदमा पछुटाउने पक्षमा छैनन् ।
फ्लप फिल्ममा ह्याट्रिक हुन नदिन अभिनेता पलले नयाँ टिम र नयाँ नाममा फिल्म गर्ने जोखिम उठाएनन् । गएको दुई वर्ष अगाडि आफू अभिनीत सुपरहिट फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ को सिक्वेललाई उनले छैटौं फिल्मको रुपमा रोजेका छन् । मंगलबार यो फिल्मको मुहूर्त भएको छ । फिल्ममा दोस्रो पटक उनले पूजा शर्मासँग रोमान्स गर्नेछन् । यो फिल्म रिलिज नहुँदै ‘स्योर सट’ हिट मानिन थालिएको छ । फिल्म फागुन २३ मा रिलिज हुनेछ ।
‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ मा पल नहुने चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । यद्यपि, गएको दुई वर्ष अगाडि आफ्नो जन्मदिनमा निर्देशक सुदर्शन थापाले फिल्मको घोषणा गर्दा पल र पूजा नै दोहोरिने बताएका थिए । तर, पछि पल र सुदर्शनबीच सम्बन्धमा तिक्तता आएको खबर बाहिरियो । दुईको सम्बन्धमा फाटो आएकै कारण उक्त फिल्म लामो समयसम्म बन्न सकेको थियो । सुदर्शन, पलको ठाउँमा नयाँ अभिनेता लिएर फिल्म बनाउने सोचमा समेत पुगेका थिए ।
फिल्मको अफर लिएर उनी अभिनेता अनमोल केसीसँग पुगेको चर्चा पनि नचलेको होइन । तर, मंगलबार यो फिल्ममा पल र पूजाको जोडी बाँधिएको औपचारिक रुपमा पुष्टि भयो । धेरैलाई ३६ को आँकडामा रहेको सुदर्शन र पलको सम्बन्ध कसरी सुध्रियो भन्ने कौतुहलता छ । आफ्नो करिअर बचाउन पल सबै दुश्मनी भुलेर सुदर्शनको शरणमा पुगेको फिल्मवृतमा यदाकदा सुनिन थालिएको छ । सत्य के हो ? त्यो भने उनी नै जान्दछन् ।
Prevछवि र शिल्पाबीच अब झगडा नगर्ने सहमति
Nextडीएसपी भन्दै ठगी गर्ने लुईटेल पक्राउ